जापानमा Best सर्वश्रेष्ठ फूल बगैंचा: शिकिसाई-नो-ओका, फार्म तोमिता, हिताची समुद्रीतट पार्क ... - Best of Japan
रंगीन फूलको क्षेत्र र नीलो आकाश Shisisai-no-oka, Biei, Hokkaido, जापान मा = शटरस्टक
के तपाईंले जापानको होक्काइडोमा सुन्दर फूल बगैंचाको बारेमा सुन्नुभयो? यस पृष्ठमा, म पाँच प्रतिनिधि फ्लोर साइटहरूको परिचय दिनेछु। जापानमा चेरी फूलहरू मात्र सुन्दर फूलहरू हुन्। यदि तपाईं शिकिसई-नो-ओका वा फार्म तोमितामा जानुहुन्छ भने, तपाईं निश्चित रूपमा इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्न चाहानुहुन्छ। होक्काइडो बाहेक राम्रा फूल बगैंचा छन्। हिताची समुद्रीतट पार्क र माउन्टको खुट्टामा फूलहरू। फुजी पनि उत्कृष्ट छन्। व्यक्तिगत रूपमा, म तपाईलाई आशिकागाका आश्चर्यजनक सुन्दर विस्टरिया फूलहरू हेर्न चाहन्छु!
Shikisai-no-oka: लैवेंडर आदि,
फार्म तोमिटा: लैभेन्डर आदि,
आशिकगा फ्लावर पार्क: विस्टरिया
हिटाची समुद्रीतट पार्क: नेमोपिला, ट्यूलिप, कोचिया आदि।
कावागुचिको-चो: मोस फ्लोक्स
Shikisai-no-oka जुलाई २०१ on मा ग्रीष्मकालमा पर्यटक रंगीन फूलको क्षेत्रमा आराम गर्दै ट्रेक्टर = शटरस्टक
Shikisai-no-oka Biei-cho, Hokkaido मा अवस्थित एक पर्यटन वृक्षारोपण हो। त्यहाँ लगभग hect हेक्टेयर को साइट मा धेरै फूल बगैंचाहरु छन्। वसन्तदेखि शरद ,तु सम्म, लगभग types० प्रकारका फूलहरू एक पछि अर्को खिलिन्छन्, जस्तै ल्याभेन्डर, नाडेशिको, सूर्यमुखी, साल्भिया, मैरीगोल्ड, ब्रह्माण्ड। ल्याभेन्डर जूनको अन्तीमदेखि अगस्टको सुरूमा देखिनै लागेको छ। ती फूल बगैंचाहरु मानौं तिनीहरू सुन्दर कार्पेट छन्। पर्यटकहरूले यी फूल क्षेत्रहरू बसको साथ यात्रा गर्न सक्छन् जुन ट्र्याक्टरले टुभिंग गर्दैछ। थप रूपमा, शिकिसाई-नो-ओकासँग अल्पाका खेतहरू छन्। तपाइँ अल्पाकालाई त्यहाँ खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू र कृषि प्रत्यक्ष बिक्री हुने ठाउँहरू छन्। जाडोमा फूलको बगैंचा हिउँमा गाडिन्छ। यस समयमा, तपाईं स्नोमोबाईल र स्लेज प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विवरणका लागि निम्न साइटमा हेर्नुहोस्।
>> Shikisai-no-oka को आधिकारिक साइट यहाँ छ
इरोडोरी क्षेत्र, टोमिटा फार्म, फुरानो, जापान। यो होक्काइडो = शटरस्टकमा प्रसिद्ध र सुन्दर फूल क्षेत्रहरू हो
फार्म तोमिता फुरानो टाउन, होक्काइडोको फार्म हो करीव करीव १ 15 हेक्टर क्षेत्रफल। तिनीहरू मध्ये आधा ल्याभेन्डर क्षेत्रहरू हुन्। ल्याभेन्डर हेर्न समय जुलाई हो। यस बाहेक, क्रोकस, बार्कफिस, हाइसिन्थ्स, ट्युलिप्स, काजल घाँस, साल्भिया, मैरीगोल्ड्स, ब्रह्माण्ड्स आदि खेती गरिन्छ र तपाईंले अप्रिलदेखि अक्टुबरसम्म सुन्दर फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
क्याफेमा तपाई लैभेंडर वा खरबूजा स्वाद नरम क्रीम खान सक्नुहुनेछ। सुक्खा फूलहरू प्रदर्शन गर्ने सुविधा पनि छ, तपाईं सुक्खा फूलहरू प्रयोग गरेर लीज आदि किन्न सक्नुहुनेछ। फार्म तोमिता वसन्त देखि शरद toतु सम्म खुला छ। विवरणका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> फार्म तोमिटाको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
निम्न लेखहरूमा गर्मीमा Biei र Furano को तस्वीरहरु प्रस्तुत गर्दछ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ हेर्नुहोस्।
हरेक वर्ष जुलाई देखि अगस्टसम्म, होक्काइडोको ल्याभेन्डर र अन्य फूल बगैंचा उनीहरूको चरम सीमामा छन्। विशेष गरी Furano र Biei मा, सुन्दर रंगीन फूलहरु को खिल मा छन्। म तपाईंलाई यस पृष्ठमा होक्काइडोमा यी फूलहरूको बगैंचामा जान दिन्छु! Hokkaido को गर्मी फूल बगैंचा को तस्वीरहरु होक्काइडो को गर्मी को ल्याण्डस्केप ...
गर्मीमा होक्काइडोमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यहरू बीआई र फुरानो हुन्। होकाइडोको मध्यमा रहेका यी क्षेत्रहरू कुनै न कुनै मैदानहरू छन्। रंगीन फूलहरू त्यहाँ फूल्छन्। यस मैदानमा प्रकृति परिवर्तन देखेर तपाईंको दिमाग ठीक हुनेछ। Biei र Furano को रूपमा, म पहिले नै केहि लेख लेखेको छु। ...
आशिकगा फ्लावर पार्क, तोचिगी प्रान्त, जापान = शटरस्टकमा सुन्दर विस्टरिया रोशनी
आशिकगा फ्लावर पार्क एक थीम पार्क हो जहाँ area ..9.4 हेक्टर जम्मा क्षेत्र टोक्योबाट १०० किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। आशिकागा फ्लावर पार्क यसको सुन्दर विस्टरिया फूलहरूको लागि प्रसिद्ध छ। १ w० बर्षको विशाल विस्टरिया लगभग १००० वर्ग मिटरमा फैलन्छ र सुन्दर बैजनी फूलहरूको साथ आगन्तुकहरूलाई अचम्मित गर्दछ। त्यहाँ सेतो विस्टेरिया पनि छ जुन meters० मिटर लम्बाई छ। त्यहाँ जम्मा 100 150० विस्टरिया छन्। यो साँझमा उज्यालो हुनेछ। यी विस्टेरिया अप्रिलको मध्यदेखि मेको बीचसम्म फूल्न जारी छन्। अन्य मौसममा, फूलहरू जस्तै गुलाब, हाइड्रेंजिया र लिली भूमि सौन्दर्यको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दछ। अक्टुबरको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीको शुरूसम्म असंख्य रोशनीहरू फूलको सट्टा लोकप्रिय छन्।
तोचीगी प्रान्त, आशिकागा शहरको आशिकागा फ्लावर पार्कमा, अप्रिलको आखिरीदेखि हरेक वर्षको मे महिनाको सुरुतिर विस्टेरिया फूलहरूको अत्यन्तै ठूलो संख्या फुल्यो। विस्टरिया फूलहरू साँझ पछि रोशन हुन्छन् र चम्किन्छन्। विस्टरियाको यो संसारमा भर्चुअल यात्रा गरौं! सामग्रीको तालिका आशिकगाको फोटोज ...
आशिकागा फ्लावर पार्क सम्म, यसले JR आशिकागा स्टेशनबाट २० मिनेट लिन सक्दछ नि: शुल्क शटल बसले र minutes० मिनेट तोबु रेलवेको आशिकागा शहर स्टेशनबाट। विवरणका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
>> आशिकगा फ्लावर पार्कको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
हिताची समुद्री किनार पार्कमा नेमोफिलाको दृश्यको आनन्द लिइरहेका पर्यटकहरूको भीड, यो स्थान जापानमा लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य = शटरस्टक
कोचिया पहाडी परिदृश्य माउन्टेनको साथ हिताची समुद्री किनार पार्कमा शरद Ibतुमा निलो आकाशको साथ इबाराकी, जापान = शटरस्टक
हिटाची समुद्रतट पार्क टोकियोको २ घण्टा उत्तरमा कार द्वारा अवस्थित एक राज्य स्वामित्व वाला पार्क हो। यो पार्क धेरै ठूलो छ। कुल क्षेत्र2350० हेक्टर छ जुन टोकियो डिस्नेल्याण्ड भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ। हाल, पार्कको रूपमा करिब २०० हेक्टेयर प्रयोग गरिन्छ।
यस पार्कमा धेरै विशाल फूल बगैंचा छन्। यद्यपि यति धेरै प्रकारका फूलहरू फूल्छन्, विशेष गरी प्रसिद्ध वसन्त नेमोफिला र फलो कोक्विया हुन्। लगभग late 4.5 लाख नेमोफिला निलो फूलहरू अप्रिल देखि मध्य मे सम्म खिलिन्छन्। अक्टुबरको शुरुदेखि अक्टुबरको मध्यदेखि, कोकिया रातो हुन्छ र उज्यालो रातो संसार फैलिन्छ।
पार्कमा बाल बगैचा र वन बगैंचामा फूल बगैचाहरु सहित, त्यहाँ ठूला अवलोकन कारहरु पनि छन्। तपाईं साइकलको आनन्द लिन पनि सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं टोकियो वरपर सुन्दर फूल बगैंचामा आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म इबाराकी प्रान्तको हिटाची समुद्रीतट पार्क सिफारिश गर्दछु। Park 350० हेक्टर क्षेत्रफलको यस पार्कमा, नेमोफिला वसन्तमा फूल्छ र कोकिआ शरद umnतुमा रातो हुन्छ। कृपया जापानी फूल बगैचाको बारेमा निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका फोटोहरू ...
>> हिताची समुद्रतट पार्कको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
"फुजी शिबाजाकुरा महोत्सव" माउन्टको उत्तरी ढलानमा अवस्थित विशाल भूमि प्रयोग गरेर प्रत्येक वर्ष मध्य अप्रिल देखि मेको अन्तसम्म आयोजना गरिन्छ। फुजी शीबाजाकुराका लगभग ,800,000००,००० सेयरहरू (Moss Phlox) सबै एकसाथ खिलिएका छन्, सुन्दर माउन्टको साथ। पृष्ठभूमिमा फुजी। यस चाडको स्थल पहिले अफ-रोड कोर्सको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। जे होस्, शिबाजाकुरा त्यहाँ रोपिएको छ, र यो वसन्त मा एक चाड स्थल को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
यस स्थलमा शिबाजाकुरा साँच्चै सुन्दर र भेट्न लायकको छ। यद्यपि धेरै धेरै पर्यटकहरू आउँदछन्, त्यसैले कार भारी अवधिमा कावागुचिको तालबाट घटनास्थलमा भीड हुन्छ। कार्यक्रम स्थल बिहान o'clock बजे देखि खुला भएको हुनाले, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई बिहान सबेरै चाँडो जानुहोस् ट्र्याफिक जामबाट प्रभावित हुनबाट जोगिन।
>> फुजी शिबा-सकुरा महोत्सवको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ